नेपाल जाने टु वे टिकट मिलाईदिनुस राजदुत ज्यु ? | कुवेतको पहिलो नेपाली अनलाईन पत्रिका
← कार्टुन बनाउने र फोटो खिच्नेलाई २ वर्ष कैद !
भारत र पाकिस्तानसँग खेल्ने मौका गुमाउन चाहन्नौं- पारस खड्का →
नेपाल जाने टु वे टिकट मिलाईदिनुस राजदुत ज्यु ?
Posted on 14/08/2018 by सुरेश गुरुङ | टिप्पणी छोड्नुहोस्
मंगल ग्रहमा मानव यात्राको तयारी भईरहेको छ । तर त्यहाँ जानका लागि वान वे बुकिंङ धेरै पहिले खुलेको थियो । नफर्कने गरी मंगल जाने रहर पनि अचम्मकै । फेरी पनि त्यसका लागि अनेकौ योग्यताका मापदण्ड छन । त्यो दिनको पर्खाईमा तछाड मछाड गर्नेको कुनै कमी छैन । यो आफैमा ब्रमाण्ड विज्ञानका विधार्थीलाई भारी रुचीको विषय हुनेछ । यता खाडी मुलुकमा आएर घरमा काम गरिरहेका नेपाली महिलाहरुको पनि नेपाल जाने कुरा मंगलको यात्रा झै भएको छ । जो नेपाल जान चाहान्छन हार्दिक विदाई छ तर फर्कनलाई विना कारण प्रतिवन्ध । घरेलु कामदारका रुपमा खाडी राष्ट्रमा जान पाईन्दैन भनेर सरकारले रोकेको त काठमाण्डौमा बस्ने जहाजमा मात्रै रहेछ । चोरबाटो हुदै संसारभरी जाने छुट छ । खाडी राष्ट्रको त के कुरा, ईराक र सिरियामा समेत सयौ महिलादिदी बहिनीहरु पुगेका पुग्यै छन ।
भारत, श्रीलंका वा अन्य मार्ग हुदै खाडि आईपुग्ने नेपाली महिलाहरुले कति सास्ती खेप्छन, ठगिन्छन, लुटिन्छन, यो कुरा नेपाल सरकार र नेपाली नियोग बाहेक अरु सवैलाई थाहा छ । यीनलाई किन थाहा छैन रहस्यको विषय यहि छ । थाहा छ भने यसको रोकथाम वा सामाधान गर्ने तत्परता यतिका बर्ष वितीसक्दा सम्म किन देखिन्दैन ? के यो कार्यक्षमताको अभाव हो या ईच्छाशक्तिको ? अन्य कारण केही भा किन केहि बोलिदैन ? यहाँ घरेलु कामदार आउनबाट रोक्ने कुरामा सरकार र नियोगहरु पूर्ण रुपमा असफल देखिएकाछन । घरेलु कामदारलाई आउन दिने सुरक्षित उपाय खोज्नेमा पनि असफल छन । यी दुवै मध्ये एउटा पनि काम गर्न नसक्नेले छुट्टीमा गएर फर्कन चाहाने गरिब दुःखी बेसहारा महिलाहरुको खुशी खोस्नुमा गर्व गर्नु कुन राजनिती हो ? कुन कुटनिती हो ? यो बुझ्न नसकिएको विषय भयो । चुनौतिका साथ कुवेत लगायत खाडी मुलुकमा रहेका सवै नेपाली कुटनैतिक नियोगहरुलाई सोध्न सकिन्छ, यो के तमासा हो ? विविसीले समाचार बनाए पछि परराष्ट्र मन्त्रालय बौरिने अनि तपाईहरु तंग्रिने ? सरकारका मन्त्रि गोर्कणका आँखा खाडीतिर आईपुग्दा सरकारको आधा उमेर नै वित्ने देखियो ।
जसले होस, जसरी होस नेपालबाट खाडी राष्ट्रमा आउने क्रम उस्तै छ जिम्मेवारी लिने कोही देखिन्दैन । त्यसरी आएका घरेलु महिला कामदाहरुलाई यहाँ काम गर्नबाट रोक्न कसैले सक्दैन । सरकारले काठमाण्डौको एउटा त्रिभुवन विमानस्थलमा रोक्ने हो यी भन्दा दर्जनौ ठुला विमानस्थल भारतमा छन त्यहाँबाट आउन कस्ले रोक्ने ? खाडी राष्ट्रमा पाईला राखेपछि उनीहरु ईलिगल हुदैनन । मज्जाले काम गर्न पाउँछन । रोक लगाईएका देशका सरकार सामु हाम्रा नियोगहरुले घरेलु कामदार दिन्न भन्नै सकेका छैनन । नत यो खालको सुविधा हुन परर्यो भन्ने गतिलो संवाद भएको कतै सुन्न पाईएको छ , यहाँको सरकारलाई हामीले दवाव दिएकै छैन । दिन पनि सक्दैनौ । भन्न पनि नसक्ने, गर्न पनि नसक्ने बरु हाम्रा चेलीवेटीहरुलाई सोही ठाउँ उहि मालिकको मा चित्त बुझेको छ भन्दा पनि फर्कन नदिने ? लाटालाई चित्त नबुझ्ने कुरा छ ।
यहाँ रहेका दुतावासले सरकारको निर्णय कार्यान्वाईन गराउन पनि नसक्नु सुरक्षित काम दिलाउन पनि नसक्नु आफैमा लज्जाको कुरा हो । कि त घरेलु कामदार आउने सवै गौडा थुन्न सक्नु परयो नत्र खोल्न परर्यो । यो त विचित्रको तमासा भईरहेको छ । सरकारले रोक लगाएको भनिएका देशहरुमा वितेका दुई तिन बर्षमा हजारौ नेपाली महिलाहरु आईसकेका छन । उनीहरु आएको दुतावासले थाहा नपाए जस्तो गरेको गरयै छ । दिल्ली महिला आयोगले कुवेत लगायत खाडीका विभिन्न देशमा आउन लागेका दर्जनौ महिला दिनहुँ समातेको छ तर नेपाल सरकार र खाडीका कुटनैतिक नियोगहरु बेखबर छन । मन त पक्कै पोलेको होला कसैले सोध्ने हुनकी भनेर तर कसले सोध्ने ? कसैको दम छैन ढुक्क भए हुन्छ महामहिम ज्युहरुले । नेपाल सरकारको दम त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल सम्म र खाडीमा रहेका नेपाली नियोगहरुको दम दुतावास कम्पाउण्ड भित्र मात्र सिमित छ भन्ने थाहा पाएपछि किन ईरिटेड पार्नु ?
अन्तमा यति चाही भनौ, विन्ति छ तपाईहरुको खाडीको बसाई सुखद रहोस । हाकेको ताकेको सवै पुरा होस सिर्फ ती विचरा महिलादिदी बहिनीहरुलाई पनि घर परिवार सँग जागिर नखोसिने शर्तमा एक पटक घर गएर आउन पाउने व्यवस्था मिलाई दिनुहोस । आफ्ना छोराछोरी र उनीहरुका छोराछोरी उस्तै हुन भन्ने बुझीदिनुस । टु वे टिकट बन्द भएको धेरै भयो । कयौले वान वे टिकट लिएर गईसके । तिनको श्राप त पक्कै लाग्ला, बाकीको श्रापबाट बच्नुहोस ।